Chivabvu 14, 2018 arun
zvirongwa guta New York blockchain centre
Akazivisa Monday muvhiki blockchain mu New York, New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) ari nezvekutanga Kuita akawanda kuisa guta pamepu sechinhu blockchain Michina nomusimboti. Chikuru pakati pavo zano kuti uvhure “Blockchain Center” kuti zvichaita zvose pave voruzhinji uchinzwira mabikirwo uye aivabatsira kukurukura pakati indasitiri wekuongorora.
The NYCEDC Akazivisawo makwikwi, kutarisirwa vomurova mukupera 2018, aida kuti vaunze pfungwa anatsiridze matunhu neminisiparati mabasa pamwe blockchain Tech.
Samourai uye goTenna pakuparurwa Bitcoin chikwama unoshanda pasina Indaneti
Sezvo Indaneti kwokubatana havawanzoenda kuwanika, yakavimbika kana private, cryptocurrency vanozvishandisa vanoda nzira nzira dzekubatanidza kune zvakarukwa. Saka New York anotsanangura startup goTenna, rakavakwa 2012 kubudikidza nevanin'ina Brazilian Daniela uye Jorge Perdomo, ari partnering pamwe Samourai Wallet kuti nokuparura ane Android Anwendung ichi zhizha kuti unobvumira vanoshandisa kutumira bitcoin kubhadhara pasina mukana wokushandisa Indaneti.
“Unofanira kukwanisa kupedza bitcoin yako kunyange njodzi munzvimbo,” goTenna injiniya Richard Meyers akati, paaitaura Perdomo varumudzani’ basa kuchangobva muPuerto Rico, apo goTenna mano akabatsira vanhu reconnect pashure Hurricane Maria. “Chero bedzi iwe une nzira kubhadharisa foni yako, unogona kuva uye meshed uye kukurukurirana.”
“Rinopa imwe nzira kuti zvikuru kusenza nemishonga,” Meyers akati.
Florida muteresi ndiye wokutanga US Govment sarudzo kugamuchira Bitcoin
A Florida County muteresi yave partnered pamwe Bitcoin kubhadhara processor BitPay kubvuma cryptocurrency zvakasiyana-siyana mabasa.
Seminole County Muteresi Joel Greenberg akati mashoko neMuvhuro kuti hofisi yake achatora Bitcoin nokuda vachibhadhara chokuita mutyairi marezinesi uye ID nemakadhi, motokari Tags uye mazita uye pfuma mutero.
Greenberg akati mashoko:
“Chinangwa changu gavhuna muhofisi ndiko kuti yedu mutengi ruzivo nokukurumidza, akangwara uye yakawanda, uye kuunza mabasa ehurumende kubva muzana remakore rechi18 kupinda muzana remakore rechi21 uye imwe nzira ari kuwedzera cryptocurrency kuti mubhadharo yedu kuita… pamwe nehofisi Seminole County Muteresi raMwari, takamboita sangano redu rokutanga hurumende kugamuchira Bitcoin… nokuita nyore uye musono kwavari,” Akatizve.
NASDAQ-dzinofambiswa cryptocurrency exchange vomurova muna June
dx.exchange, inosidzikwa kuti vomurova mwedzi unotevera, ndiye wokutanga crypto Exchange dzinofambiswa ne NASDAQ. "The mukana pamwe ichi ndiyo katatu: zita zvizivikanwe, mabikirwo nemirau,"Akadaro yori Exchange CEO Daniel Skowronski.
Nepo wokutanga anobatsirwei zvikuru hazvidi tsananguro, Skowronski mberi akatsanangura kuti zvigadzirwa zvavo kuti kuvimba NASDAQ kuti kwezvivako, akadai kwayo enzanirana injini - rakashandiswa pamusoro 70 exchanges pose.
SAP kuti vomurova blockchain zvitengeswa chirongwa
Nemakambani Software makasimba SAP iri kuwedzera basa raro blockchain kupinda romugove cheni nzvimbo.
SAP anotarira kushandisa Tech kuti zvokurima zvitengeswa ngetani nenzira Farm kwayo Consumer danho.
Torsten acce, SAP kwakaita blockchain kutungamirira akati “The kunowedzera inokwanisa makambani kuti kuronda kwakatangira zvinhu zvokudya, pinda zvikumbiro nezvipiriso, uye tsvagurudza tongai kwema.”
Sei kuwana pamusoro intraday cryptotrading?